हप्तामा दुई दिन बिदाले इन्धन खपत कति ? - Naya Aawaj
(FILES) In this file photo taken on April 17, 2020aman stops to refuel his car atapetrol filling station in Paris on the 32nd day ofastrict lockdown aimed at curbing the spread of the COVID-19 pandemic, caused by the novel coronavirus. - A "discount at the pump of 15 cents per litre" will apply from 1 April and for four months for all French people, in order to deal with the surge in fuel prices, French Prime Minister announced on March 12, 2022 in the daily Le Parisien. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)
सन् २०२२ मार्चको तथ्याङ्कबाट नेपालमा ६३ हजार किलोलिटर पेट्रोल र १ लाख ६० हजार किलोलिटर डिजेल खपत भएको नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । यसबाट सरदर दैनिक औसत २५ सय २० किलोलिटर पेट्रोल र ६४ सय किलोटिलर डिजेल खपत भएको देखिन्छ । यद्यपि, यो महिनाभरी भएको पेट्रोल र डिजेल खपतलाई सार्वजनिक बिदा (चार शनिबार) र एक सार्वजनिक बिदा बाहेकका दिनलाई हिसाब गरेर निकालेको औसत खपत हो ।
अब आगामी जेठ १ देखि लागू हुने दुई दिन बिदाले पेट्रोलियम पदार्थको खपत (सरकारको अपेक्षा) मासिक करिब २२ दिन मात्र हुन्छ । अघिको दैनिक औसत २५ सय २० किलोलिटरलाई २२ दिनले गुणा गर्दा ५५ हजार ४४० किलोलिटर हुन आउँछ । यसैलाई अघिल्लो महिनाको खपतसँग दाजेर हेर्दा करिब ७ हजार ५६० किलोलिटर पेट्रोल खपत कम हुने देखिन्छ । यस्तै डिजेलमा पनि अघिल्लो महिनाको खपत दरलाई नै आधार मान्दा २५ दिनमा दैनिक औसत ६४ सय किलोलिटर खपत हुन्छ र यसैलाई २२ दिनमा झार्दा १ लाख ४० हजार ८०० किलोलिटर हुन आउँछ । अघिल्लो महिनाबाट यो घटाउँदा मासिक १९ हजार २०० किलोलिटर डिजेल बचत हुने देखिन्छ ।
यसलाई अहिलेको बजार भाउ रू. १६० अनुसार हिसाब गर्दा पेट्रोलमा १२ लाख ९ हजार ६०० रुपैयाँ बचत हुन्छ भने डिजेल प्रतिलिटर रू. १४३ अनुसार हिसाब गर्दा २७ लाख ४५ हजार ६०० रुपैयाँ बचत हुन्छ । एकमुष्ट पेट्रोल र डिजेलमा मासिक ३९ लाख ५५ हजार २०० रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ । यसले केही हदसम्म भने पनि व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
तर, दुई दिन बिदा दिँदा थप कर्मचारीहरू घुमफिरमा निस्किने र अझ पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्न सक्ने खतरा समेत रहेको छ । विद्यालय तथा क्यम्पसका शिक्षकहरु व्यवहारिक काममा टाढासम्म पुगेर फर्कने क्रम बढ्न सक्ने र विद्यार्थीहरु पनि धेरै बिदाको कारण सिनेमा हल र वनभोज जस्ता ठाउँमा बढी जान सक्ने हुनाले ईन्धनको उपयोग उल्टो नबढ्ला भन्न सकिदैन ।